စျေးချိုတယ်ဆိုပြီး အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ မှာယူလိုက်တဲ့ ခေါင်းအုံးမှ အနံ့တွေထွက်နေတာကြောင့် ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာ နောင်တကြီးကြီး ရသွားခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး – KK Daily News
စျေးချိုတယ်ဆိုပြီး အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ မှာယူလိုက်တဲ့ ခေါင်းအုံးမှ အနံ့တွေထွက်နေတာကြောင့် ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာ နောင်တကြီးကြီး ရသွားခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
အိမ်ထောင်ဦးစီး တစ်ဦးဟာ ငွေထွက်ရှာနေချိန် အိမ်ရှင်မများကတော့ မိမိအိမ်ရဲ့ ချက်ရေးပြုတ်ရေး၊ အစားသောက်များအပြင် ၊သန့်ရှင်းရေး စတဲ့ အလုပ်အသီးသီးကို လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်
အိမ်ရှင်မများအနေဖြင့် နေအိမ်အတွက် လိုအပ်မည်ထင်သည့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကို မိသားစု၏ ပိုက်ဆံဝင်ငွေနှင့်လိုက်ဖက်အောင် သုံးစွဲကြရပေသည်။
ဝင်ငွေများအပေါ်တွင်ကြည့်၍ အသုံးအဆောင်လေးတွေကို အနည်းငယ်စီ ဝယ်ယူစုဆောင်းတတ်သည်မှာ အာရှဒေသ၏ အမူအကျင့်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၁ရာစုမှာတော့ အိမ်အတွက်လိုအပ်သော ပစ္စည်းများကို စျေးအထိ သွားဝယ်စရာမလိုတော့ပဲ အိမ်ကနေပဲလိုင်းပေါ်မှာ ဝယ်ယူလို့ရရှိနေပါပြီ။
သို့ဖြစ်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ အွန်လိူင်းပေါ် စျေးဝယ်ရင်းဖြင့် စျေးသက်သာသည့် ခေါင်းအုံးလေးကို ဝယ်ယူမိခဲ့ရာမှ သူမ၏အဖြစ်လေးကို ရယ်မောစွာ လိုင်းပေါ်တွင် ဝေမျှသွားခဲ့ပါတယ်။ အသူဟာ ခေါင်းအုံးဝယ်လာခဲ့ပြီး နေအိမ်ရောက်သောအခါ ထူခြားသည့် အနံ့တစ်ခုကို ရရှိနေသည့်အတွက် ခေါင်းအုံးကို ဖွင့်ကြည့်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
သူမရဲ့ စျေးချိုစွာ ဝယ်လိုက်တဲ့ ခေါင်းအုံးလေးထဲမှာတော် ကလေးတစ်ခါသုံး ဒိုက်ပါအဟောင်းတွေကို ထည့်ထားကြောင်း တွေ့ခဲ့ရပြီး အလွန် အံ့အားသင့်သွားခဲ့ကြောင်း ပြန်လည်မျှဝေခဲ့တာပါ။ ဒီအဖြစ်လေးလိုပဲ စာဖတ်သူတွေထဲမှာကော ရှိနေမလားနော်?
KK Daily News(JAZZ)
အိမ္ေထာင္ဦးစီး တစ္ဦးဟာ ေငြထြက္ရွာေနခ်ိန္ အိမ္ရွင္မမ်ားကေတာ့ မိမိအိမ္ရဲ႕ ခ်က္ေရးျပဳတ္ေရး၊ အစားေသာက္မ်ားအျပင္ ၊သန့္ရွင္းေရး စတဲ့ အလုပ္အသီးသီးကို လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
အိမ္ရွင္မမ်ားအေနျဖင့္ ေနအိမ္အတြက္ လိုအပ္မည္ထင္သည့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေလးေတြကို မိသားစု၏ ပိုက္ဆံဝင္ေငြႏွင့္လိုက္ဖက္ေအာင္ သုံးစြဲၾကရေပသည္။
ဝင္ေငြမ်ားအေပၚတြင္ၾကည့္၍ အသုံးအေဆာင္ေလးေတြကို အနည္းငယ္စီ ဝယ္ယူစုေဆာင္းတတ္သည္မွာ အာရွေဒသ၏ အမူအက်င့္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၁ရာစုမွာေတာ့ အိမ္အတြက္လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းအထိ သြားဝယ္စရာမလိုေတာ့ပဲ အိမ္ကေနပဲလိုင္းေပၚမွာ ဝယ္ယူလို႔ရရွိေနပါၿပီ။
သို႔ျဖစ္ရာ ထိုင္းနိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ အြန္လိူင္းေပၚ ေစ်းဝယ္ရင္းျဖင့္ ေစ်းသက္သာသည့္ ေခါင္းအုံးေလးကို ဝယ္ယူမိခဲ့ရာမွ သူမ၏အျဖစ္ေလးကို ရယ္ေမာစြာ လိုင္းေပၚတြင္ ေဝမွ်သြားခဲ့ပါတယ္။ အသူဟာ ေခါင္းအုံးဝယ္လာခဲ့ၿပီး ေနအိမ္ေရာက္ေသာအခါ ထူျခားသည့္ အနံ႕တစ္ခုကို ရရွိေနသည့္အတြက္ ေခါင္းအုံးကို ဖြင့္ၾကည့္ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။
သူမရဲ႕ ေစ်းခ်ိဳစြာ ဝယ္လိုက္တဲ့ ေခါင္းအုံးေလးထဲမွာေတာ္ ကေလးတစ္ခါသုံး ဒိုက္ပါအေဟာင္းေတြကို ထည့္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အလြန္ အံ့အားသင့္သြားခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္မွ်ေဝခဲ့တာပါ။ ဒီအျဖစ္ေလးလိုပဲ စာဖတ္သူေတြထဲမွာေကာ ရွိေနမလားေနာ္?
ကုန်တိုက်ထဲမှာ သားဖြစ်သူနဲ့ စျေးဝယ်ထွက်ရင်း သားပျောက်သွားတာကြောင့် အလန့်တကြား လိုက်ရှာခဲ့ရာမှ ဇိမ်ကျစွာ အိပ်မောကျနေတဲ့ သားဖြစ်သူကို ပစ္စည်းတွေကြား တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ မိခင်ရဲ့အဖြစ်
အသက် ၂၆နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့် ယူစရာ မိန်းမ မရှိတဲ့အပြင် ရည်းစားပင်တစ်ခါမှမထားဖူးတာကြောင့် အိမ်ကမောင်းချခံလိုက်ရသော ကောင်လေး